Ukubuza ii-Polite Imibuzo yabafundi be-ESL
Uqwalaselo olubanzi lweentlobo ezintathu zeemibuzo yabafundi be-ESL
Eminye imibuzo ihloniphekile kunabanye, kodwa kufuneka ukwazi ukuba ungayisebenzisa nini nawuphi uhlobo lombuzo. Ngayiphi na imibuzo yeemviwo ekhankanywe ingasetyenziselwa ukudala imibuzo ehloniphekileyo. Ukusebenzisa nganye ifom ngokuzimeleyo, khangela umboniso okhawulezayo wezithathu zemibuzo efundwa ngesiNgesi.
Umbuzo othe ngqo
Imibuzo eqondekileyo ingaba yebo / akukho imibuzo efana neyo "Ngaba utshatile?" okanye imibuzo yolwazi efana nokuthi "Uhlala phi?" Imibuzo eqondekileyo iya ngqo kumbuzo kwaye awubandakanyi ulwimi olongezelelweyo olunjengokuthi "Ndiyazibuza" okanye "Unganditshela" ...
Imibuzo eqondekileyo yenze isenzi senzuzo phambi kwesihloko sombuzo:
(Umbuzo umbuzo) + Ukuncedisa isenzi + Isihloko + seVenzi + Izinto?
Ngaba beza kwiqela?
Usebenze kangakanani le nkampani?
Ukwenza Imibuzo Engqalileyo yePoliti
Imibuzo eqondekileyo ingabonakala ingabi nantoni ngamanye amaxesha, ngakumbi xa ucela umntu ongowokungazi. Umzekelo, ukuba ufika kumntu kwaye ubuze:
Ngaba i-tram iyayeka apha?
Ngaba unako ukuhamba?
Kuchanekile ukubuza imibuzo ngale ndlela, kodwa kuyaqhelekileyo ukwenza le mibuzo yemibuzo ihloniphe ngokufaka 'uxolo' okanye 'undixolele' ukuqala umbuzo wakho.
Ndixolele, ibhasi ihamba nini?
Ndixolise, lixesha lini na?
Ndixolele, yiphi ifom endiyifunayo?
Ndixolele, ndihlale apha?
Imibuzo enokuthi 'inako' iyenziwa ngokuhlonipha ngokusebenzisa 'inokuthi':
Ndixolele, unokundinceda ndikhethe oku?
Ndixolele, unako ukundinika isandla?
Ngaba ungazichazela oku?
'Ngaba' kuya kusetyenziswa ukwenza imibuzo ihlonipheke.
Ngaba undiboleka ngesandla kunye nohlamba?
Ngaba unokucinga ukuba ndihleli apha?
Ngaba undivumela ukuba ndiboleke ipensela yakho?
Ngaba ungathanda into yokutya?
Enye indlela yokwenza imibuzo echanekileyo ngakumbi ukufaka 'nceda' ekupheleni kombuzo:
Ngaba ungawuzalisa le fom, nceda?
Ngaba unokunceda, nceda?
Ngaba ndinokuba nesobho ngaphezulu, nceda?
Nceda, ndingenako isobho?
' Ngamana' isetyenziswe njengeendlela ezisemthethweni zokucela imvume kwaye ihloniphekile. Ngokuqhelekileyo kusetyenziswa kunye 'I', kwaye ngamanye amaxesha 'thina'.
Ingaba ndingangena, nceda?
Ngamana ndingasebenzisa ifowuni?
Ngamana sinokukunceda kulobu busuku?
Ngamana singenza isiphakamiso?
Imibuzo engangqaliyo iqalisa ngolwimi olongezelelweyo ukwenza umbuzo uhlonipheke. Ezi binzana ziquka "Ndiyazibuza", "Unganditsho", "Ucinga ukuba" ...
Imibuzo engangqaliyo iqalisa ngegama lokuqala. Qaphela ukuba ngenxa yemibuzo engangqaliyo ayiguquli umxholo njengemibuzo engqalileyo. Sebenzisa imibuzo imibuzo malunga nemibuzo yolwazi kwaye 'ukuba' okanye 'nokuba' yeewe / akukho imibuzo.
Inkcazo Yokuqala + Umbuzo Igama / Ukuba / Ingaba + Isihloko + Ukuncedisa isenzi + Isenzi esiPhambili?
Ngaba unganditshela apho edlala itennis?
Ndiyazi ukuba uyazi ukuba lixesha lini.
Ngaba ucinga ukuba uya kukwazi ukuza ngeveki ezayo?
Ndixolise, Ngaba uyazi ukuba lihamba nini ibhasi elilandelayo?
Imibuzo engacacanga: I-Polite kakhulu
Ukusebenzisa iifomu zemibuzo engacacileyo yindlela ehloniphekileyo yokubuza imibuzo ehloniphekileyo. Ulwazi oluceliweyo lufana nemibandela engangqalileyo, kodwa ithathwa njengoluhle kakhulu. Qaphela ukuba umbuzo ongqalileyo uqala ngegama (Ndiyazibuza, Ngaba ucinga, Ngaba ucinga, njl.) Umbuzo wangempela ubeka kwifom yesigwebo esifanelekileyo:
Ibinzana lokuqala + lombuzo (okanye ukuba) + isivakalisi esihle
Ndiyabuza ukuba unokundinceda ngale ngxaki.
Ngaba uyazi xa isitimela esilandelayo sishiya?
Ingaba ucinga ukuba ndivule iwindi?
QAPHELA: Ukuba ubuza umbuzo othi 'yebo-ayikho' usebenzise 'ukuba' ukudibanisa ibinzana lokuqala kunye nesigqibo sombuzo. Ngaphandle koko, sebenzisa igama lombuzo othi 'phi, nini, kutheni, okanye njani' ukudibanisa amabini amabini.
Ngaba uyazi ukuba uya kuza kumcimbi?
Ndibuza ukuba unokuphendula iimbuzo ezimbalwa.
Unokundixelela ukuba utshatile?
Iimpawu zemibuzo zisetyenziselwa ukujonga ulwazi esicinga ukuba luchanekileyo okanye ukucela ulwazi olungakumbi ngokuxhomekeke kwintetho yezwi. Ukuba ilizwi liyakhuphuka ekupheleni kwesivakalisi, umntu ucela ulwazi oluninzi. Ukuba ilizwi liyahla, umntu uqinisekisa ulwazi olwaziwayo.
Iimpawu zemibuzo zisebenzisa uhlobo oluthile lwesenzi ukunceda kumbuzo ochanekileyo ukugqiba isivakalisi nge 'tag'.
Isihloko + Ukuncedisa izenzo + zento, + Ukwahlukana noNcedo lweVerb +?
Uhlala eNew York, akunjalo?
Akazange afunde isiFrentshi, unayo?
Sihlobo oluhle, akunjalo?
Ndidibana nawe ngaphambili, akunjalo?
Imibuzo engqalileyo neyiyo ngqo isetyenziselwa ukucela ulwazi ongazi. Iimpawu zemibuzo ngokuqhelekileyo zisetyenziselwa ukujonga ulwazi ocinga ukuba uyazi.
Imibuzo yePolite Questions
Okokuqala, qaphela uhlobo luni lombuzo oluceliwe (okt, ngqo, ngqo okanye umbuzo wombuzo). Emva koko, nikeza igama elingekhoyo ukugcwalisa i-gap ukugqiba umbuzo.
Unganditshela ______ uhlala?
Abayi kuba khona kweli klasi, _____?
Ndiyambuza ______ uthanda i-tshokoleta okanye akunjalo.
______ mna, ikhefu lishiya nini?
Ndixolise, _____ undibanceda ngomsebenzi wesikolo?
Ngaba uyazi ukuba uMarko _____ usebenze kangakanani kuloo nkampani?
_____ Ndenza isiphakamiso?
Ndixolise, ngaba uyazi _____ ukubonisa okulandelayo kuqala?
> ukuba / nokuba
> Uxolo / Uxolele
> unako / uza
> nini / nini ixesha
Izikhundla zeNgingqi kunye noMoya
Hlola iiNkanyezi eziPhambili kwiLanga
"Intliziyo Elula" nguGustave Flaubert IsiFundo SokuFunda
Yiyiphi iNkundla yeGalofu ye-TPC? (Kwaye Yintoni 'i-TPC' emele?)
4 I-Free GED Prep Classes ye-Adults kwi-Intanethi
4 I-Superhero ye-Action-packed vs Superhero Movie Battles